टिचिङ अस्पतालकै चिकित्सक/नर्सले पाएनन् कोभिड-१९ जोखिम भत्ता – Health Post Nepal
टिचिङ अस्पतालकै चिकित्सक/नर्सले पाएनन् कोभिड-१९ जोखिम भत्ता
२०७७ साउन २० गते १०:२८
साउन २०– जोखिम मोलेरै संक्रमितको उपचारमा खटिएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सले झण्डै महिनादेखि निरन्तर उपचारमा संलग्न भएपनि हालसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने निजी अस्पतालका जनशक्तिलाई समेत जोखिम भत्ता दिने निर्देशिका जारी गरेपनि हालसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै चिकित्सक र नर्सलाई भत्ता दिएको छैन् ।
दीर्घरोग र अन्य जटिलता भएका संक्रमितको उपचारका लागि तोकिएको तेस्रो स्टेजको अस्पताल भनिएपनि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पताल नभएको भन्दै भत्ता दिन इन्कार गरेको हो ।
शिक्षण अस्पताल त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्यायन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गत पर्छ ।
अस्पतालले हालसम्म ४२ जना कोरोना संक्रमितको उपचार गरिसकेकोमा २१ जनालाई आसियूमा राखेरै उपचार गरिसकेको छ ।
अस्पतालले चैत २३ गतेमा संक्रमित भर्ना लिएर उपचार सुरु गरेको थियो ।
अस्पतालमा १५ वेडको इर्मजेन्सी, ४० वेडको आइसोलेसन वार्ड र १० बेडको आइसियू संचालनमा छन्। तीन तलाको कोभिड–१९ भवनमा नर्स मात्रै १४० जना खटिएका छन् । ठूलो संख्यामा चेस्ट फिजिसियान, आइसियु स्पेसियालिस्ट, फिजिसियान र आवश्यकताका आधारमा अन्य विशेषज्ञ कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन् ।
कोभिड१९ उपचार टीमका संयोजक डा. सन्तकुमार दासले पाँच महिनादेखि उपचारमा खटिएका जनशक्तिले कुनै पनि जोखिमभत्ता नपाएको बताए । ‘अहिले उहाँहरु निरुत्शाहित भइसक्नु भयो,’ डा. दासले भने । कोभिड युनिटकै अर्का सदस्य एवं आइसियु इन्चार्ज डा. सुवास आचार्यका अनुसार अस्पतालका निर्देशकसहितका अधिकारीले बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गरेपनि स्वास्थ्यले कुनै सुविधा दिएको छैन् ।
‘मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पताल भएकोले उसैले जोखिमभक्ता दिनुपर्ने हठ लिइरहेको छ,’ । उनले भने, ‘त्रिविले शिक्षण सिकाई क्रियाकलापका लागि मात्रै दिने हो ।
‘मिटिङमा पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कुरा सुन्नै नचाहनेछन्, अरु अस्पतालमा अन्य अनुदान जाँदा पनि त्रिविलाई दिन हुन्न भनेको सुनिन्छ’
डा. दासले पनि महामारीमा जोखिम मोलेरै काम गरिरहेका जनशक्तिमाथि यो मन्त्रालय यो मन्त्रालय भनेर भेदभाव गरिरहे त्यसले सेवा प्रवाहमै असर पर्नसक्ने बताए । ‘स्वास्थ्य सेवा दिएको जोखिमभक्त मागिएको हो,’ उनले भने, ‘यो परिस्थिति अन्त्य नभएर हामी उपचारलाई निरन्तरता दिनै कठिन छ,’ ।
अस्पतालले यसअवधिमा गम्भीर अवस्थाका ४२ संक्रमतिको उपचार गरिसकेको छ । खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले २ साताको ड्युटीपछि क्वारेनटाइनमा जाने र त्यसको ५ दिनमा पिसिआर गरेर ५ दिनपछि फेरी काममा फर्किने गरेका छन् ।
डा. आचार्यले जोखिमभक्तासँगै कोभिड युनिटमा काम गरेका जनशक्तिले तोकिएको समय काम गरेपछि मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दाको होटल खर्चसमेत नपाएको बताए ।
अस्पतालले मापदण्डअनुसार काम गरेपछि जनशक्तिलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेको छ । यसरी बस्दा प्रति दिन २ हजार खर्च दिने निर्णय भएको पत्राचार मन्त्रालयले गरेपनि पैसा भने दिएको छैन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम अस्पतालले उपचार गरेको बिरामीका संख्याका आधारमा अनुदान दिने र त्यही अनुदानबाट सबै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका अन्य अधिकारीले भने स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार र जिम्मेवार अधिकारीहरु त्रिवि शिक्षण अस्पतालप्रति पूर्वाग्रही भएकै कारण भत्तालगायत कुनै पनि अनुदान नगएको हुनसक्ने बताए ।
‘मिटिङमा पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कुरा सुन्नै नचाहनेछन्, अरु अस्पतालमा अन्य अनुदान जाँदा पनि त्रिविलाई दिन हुन्न भनेको सुनिन्छ’ उनले भने ।
कति पाउछन् स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्तासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । जसअनुसार उपचार जोखिमका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५०, ७५ र १ सय प्रतिशत जोखिम भत्ता दिनुपर्छ ।
कोरोना उपचारमा खटिने चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायक, स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमका आधारमा भत्ता प्राप्त हुनेछ।
सरकराले एम्बुलेन्स चालक तथा सहायक, इलेक्ट्रिसियन तथा प्लम्बर, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइमा संलग्न कर्मचारी, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता पाउने कोभिड(१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
४. कोभिड(१९ परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिमध्येको प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणमा संलग्न जनशक्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ज्सञ य प्रतिशत।
५. कोभिड(१९ का बिरामीसँग सम्पर्कमा आएकाको खोजी र परीक्षणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सतप्रतिशत भत्ता।
७. कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग पु¥याउने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत जनशक्तिको पुस २८ र अन्यको हकमा चैत ९ देखि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भइसकेको वा जोखिम नरहेको निर्णय भएको मितिसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।